Izinqubo zebhizinisi: izibonelo kanye nencazelo
Yiziphi zebhizinisi? Izibonelo kuyosenza siqonde kangcono ngale ndaba, ngakho sizokwenza ngenkuthalo ukuzisebenzisa.
Ukuze uqale, ake baqonde esifanayo, yiziphi izinqubo zebhizinisi. Ngakho kuyinto ukulandelana isethi yezenzo ezithile ezihlose ukuguqulela imithombo wathola emnyango umkhiqizo osuphelile eyigugu ukuze abathengi ngesikhathi okukhiphayo. Ngenxa le ncazelo, singaqonda ukuthi izinqubo zebhizinisi babe enhlanganweni ngayinye. Semthethweni noma cha, akunandaba. Khumbula, ungahlala ukuhlangabezana izinqubo zebhizinisi. Tibonelo taletinhlobo uzobe eziphoqelelwe kamuva esihlokweni.
Ake sibheke isibonelo ekhaya. Kunezindlela wekhaya ofuna ukugeza izitsha (inqubo ibhizinisi). It uphathisa lokhu Umshini wokuwasha izitsha msebenzi. Emnyango esinalo izitsha ezingcolile. Ngesikhathi inqubo, amanzi zizosetshenziswa, yokuwasha kanye nogesi. Futhi sizobe uthole izitsha ezihlanzekile. Ngokusho kohlelo okunjalo futhi ukwakha izinhlelo zebhizinisi. Izibonelo okuyinto uzonikezwa ngemuva kwalokhu kuphela ukuqinisekisa la mazwi.
Njengoba sinesithakazelo kwesikwenzayo zebhizinisi (izibonelo eziqondile), ke masingalali hlehlisa, futhi ngokushesha uthole phansi ibhizinisi. Ake sithi sinalo inkampani, okuyinto inendlela ukusebenza nokuphathwa. Ngokusho kwakhe, inkampani - iqoqo amayunithi. Futhi ngamunye usebenza ukwenza umsebenzi wabo ethize. Kodwa ezimweni ezinjalo, lapho amayunithi ngabanye bagxile ekufezeni ukusebenza yabo ngokuvamile abaphethwe kahle jikelele wenkampani.
Ake sibheke inqubo ejwayelekile kokungqubuzana. umnyango yokuthengisa kudinga ukwanda esiphezulu ububanzi kungenzeka ukukhula inzuzo. Ngesikhathi esifanayo nabo bafuna isitoko umkhiqizo kwaba njalo isitokwe. Nakuba umnyango izimpahla uhlela ukuthenga ibanga ewumngcingo, futhi inqwaba. Ngempela, nangaphansi kwezimo ezinjalo, ngeke usebenze ngendlela efanele futhi sikhule ingxenye yabo eyinhloko (ngokunembile - ukulahla intengo kubadayisi). Lokho kuyinqubo ibhizinisi ukuqaliswa, ematiko ufuna ehlukile.
Ubona konke okwenzekayo njengoba iqoqo izinqubo. Kukhona ezinkulu nasekusekeleni. inqubo ngamunye kunenjongo wayo okhethekile, okuyinto subordinated ukuba inkinga ezibhekene yonke inkampani. Ngaphezu kwalokho, kukhona umnikazi ophethe imithombo futhi unesibopho ekukhishweni zonke kunesidingo. Kufanele futhi kube uhlelo lokulawula izinga nokulungisa amaphutha. Akubuzwa, ukuthi inqubo eyodwa angeke kwenteke ngaphandle imithombo. Ukuqoqa out uhlu izingxenye uhlelo izinkomba, okuyinto Kuhlolwa kanye izinqubo zebhizinisi. Izibonelo zezinto, phela kwathiwa wabathembisa ukuthi babezoba khona? Manje ake sibheke eyodwa futhi.
Cabanga ibalazwe. In the isikhungo kuyinto core inqubo ibhizinisi. It ihlukaniswe yaba izingxenye ehlukile. Sebeya ukulawula kanye nokugcina izinqubo ukuthi ukuthi konke wabulawa njengoba kudingeka. Lokhu kuyoba inqubo indlela. Lapho ekusebenzeni ngesinye sezinqumo usuphothuliwe, it is adluliselwa ukuba kwenziwe lokhu okulandelayo.
Incazelo izinqubo zebhizinisi
Izibonelo zalokhu Imibandela kungabonwa kuso sonke lesi sihloko. Kodwa imibhalo ngokugcwele ngokuvamile Kwakufana ukushuba incwadi encane (noma ngaphezulu, uma silitadisha ngokucophelela umsebenzi enkampanini enkulu).
Business Process Modeling (izibonelo zazo futhi ezilapha) idinga ukuthi zonke imisebenzi ibhizinisi babenjengomuntu ecacile futhi esobala. Lokhu kuzokuvumela ukuba sihlaziye indlela engcono ukuhlonza izinkinga ezihlukahlukene ngaphambi kokuba izohluleka. Kumele kukhunjulwe ukuthi main umsebenzi izincazelo - kungukuqonda nokuxhumana amayunithi ehlukile, bheka lokho futhi ababashisela adlule esigabeni ngasinye umsebenzi. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba kakhulu lula lithathelwe abasebenzi abasha kanye nokunciphisa ukwencika ukuzinza kwamabhizinisi kusukela ezibangelwe umuntu engazinzile. Futhi kuzoncishiswa nge efanele indlela izindleko yokusebenza. Yilokho okwenza incazelo izinqubo zebhizinisi. Isibonelo nokwenza ezinjalo singaba ukulawula cishe zonke inkampani yimpumelelo.
Ake sibheke isibonelo esiwusizo inqubo ibhizinisi ibhizinisi. Ekuqaleni, kudingeka unakekele leqembu zokusebenza yephrojekthi. Kumiswa It is kusukela izisebenzi zale nkampani. Ngokuvamile, kuvela ukuthi omunye ithimba zokusebenza akwanele. Yini-ke engenziwa? Ukuze wenze i-nokungabi namandla zingathola iqembu yesikhashana. Ungagxambukeli, futhi udale ochaza indlela inqubo esebenza ngesikhathi esithile. Kufanele sifune ukuveza noma ukuxhumana phakathi izenzo, kunokuthi ukulungisa imininingwane emihle.
Ukuze ugweme kokushiya eceleni, ungasebenzisa amabalazwe ejwayelekile kanye namafomu izinqubo. Ngo inqubo ukuthuthukiswa kunconywa ukusebenzisa indlela ziwukulinganisela ngokulandelana. Ngamanye amazwi, kubalulekile ukuba baphindaphinde umjikelezo yezenzo ukuthuthukisa kuze umphumela eyamukelekayo eyatholakala.
Yini okufanele banake?
Kufanele ugxile zihloko ezilandelayo:
Incazelo amalunga omzimba.
Kuchazwa izinkomba kanye indices.
Into engcono mayelana nomqondo izakhi ezidingekayo anganika isibonelo sangempela -reinzhiniring izinqubo ekhona ibhizinisi ibhizinisi. Kodwa ezimweni ezinjalo kubalulekile ukuba alungiselele yokuthi kufanele bajwayelane eziningi imibhalo.
Mayelana namakhadi Isho iZwi
Ngakho, sesikubonile ezimboziwe, kuyini izinqubo zebhizinisi, izibonelo kubo empilweni yangempela. Manje ake ubheke amadokhumenti wobuchwepheshe, okuyinto okumelwe yenziwe uma sifuna incazelo enembile futhi icacile. Ngakho, ekuqaleni kuyoba ezifiselekayo ukuba banake ibalazwe inqubo ibhizinisi. Kuyinto ukumelwa sokuqhafaza amisiwe njengoba idayagramu block. Kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi umuntu ngamunye owayekhona wayenikezwa ikholomu ehlukile. Umugqa zinkathi afakiwe. ikhadi ehlotshisiwe ngokugcwele ikuvumela uhlole ukuthi ukusebenza iye ezivumelanisiwe.
Ungase futhi ulandelele bese sihamba ukuthi nokuthi ulwazi phakathi kweminyango ezahlukene inkampani. eminye imibuzo kufanele abulawe okungcono umphumela kungenzeka. Kumbe ngubani owenza lo msebenzi? Kungani kubalulekile ukwenza? Kuyini lokhu? Lapho udinga afeze ukuhlinzwa? Lapho Kwenziwa? Nakuba ngcono izinqubo ekhona osche Kufanele ucele noma ngabe kungathuthukiswa.
Zidingeka ukuhlonza ezibucayi kakhulu zebhizinisi ngaphakathi ibhizinisi. Phakathi ukulungiselela yabo kunakwe, futhi interrelation kwazo zonke izehlakalo, kanye degree of ukuphazamiseka.
Ekuhlaziyeni inqubo uchungechunge kulula ukubona ukuthi uhamba bashintshisane ngolwazi kusukela phezulu kwesobunxele kuya kwesokudla. Lokho, ifomu zezibalo ichaza ubuhlobo phakathi komphakeli nomthengi, okwethulwa ngesimo isikwele. Ngo kwengqamuzana ngayinye matrix ngesikhathi esifanayo ikhomba zonke izimfuneko ezidingekayo ngezenzo ukuthi abangu / zenziwa / ukuba kwenziwe. Ziyakwazi uhlobo onobuhle mgudumbili ngawo ukuba yahlulele lokho kwenziwa futhi yini umgomo usenziwa. Ubunzima ekulungiseleleni matrix nazi ukuthi ukubala nge ukunemba esiphezulu Ngokuvamile kuye kudingeke usebenzise isamba esikhulu idatha. Lokhu kusho khona elikhulu inani Imininingwane. Ngakho ezimweni ezinjalo ngokuvamile lisetshenziswa Imininingwane digital, okuyinto evame kusadingeka ukuba bakopele.
Kuyini Outsourcing: amasevisi amafemu kwezinzwa
Ukuhlolela ubungozi kanye nesidingo ke
Indlela sifake isongo elastics ngezandla
1c - abaqotho nabaholi bamabhizinisi umsizi
Malakhov Kurgan ezisenkumbulweni izizukulwane
Indlela yokwenza yisihlangu "Maynkraft": umhlahlandlela enemininingwane
Duck Domestic njengoba iwuphawu ingcebo ukunambitha idili samaholide